भिन्डीको सेवनले स्वाथ्यमा पुग्ने फाईदा जानेर आज तपाइ चकित पर्नुहुनेछ - ज्ञानविज्ञान
अझकेहि बुदागत रुपमा भिन्डीका फाइदाजनक गुण
भिन्डी अर्थात् रामतोरियाँमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यो राम्रोसँग पच्छ र यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
गर्भवती महिलाले भिन्डी खानाले भ्रूणको दिमागको विकास राम्रो हुन्छ । साथै, भिन्डी खाँदा गर्भ तुहिने जोखिम पनि घट्छ ।
भिन्डीमा भिटामिन–के र फोलेट्स पाइन्छन्, जसले रगत जम्नबाट रोक्छन् र हड्डी बलियो बनाउने गर्छन् ।
भिन्डीमा पाइने भिटामिन–सीलगायत तत्वले दमको असर कम गर्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार भिन्डीको फूल र पातलाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निको पार्न प्रयोग गरिन्छ । वैद्यको परामर्शमा भिन्डीको फूल र पातलाई ब्रोङ्काइटिस र निमोनियाको उपचार गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भिन्डीमा पाइने फाइबरले कब्जियतको समस्या कम गर्छ ।
भिन्डी खानाले क्यान्सरको जोखिम घट्छ । भिन्डी खाइरहने गर्दा आन्द्रा, कोलोन–रेक्टल क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
भिन्डीमा क्यालोरी कम पाइन्छ, जसले गर्दा यो मोटाउने समस्या भएकाहरूका लागि लाभदायक हुन्छ ।
भिन्डीमा पाइने भिटामिन–सीलगायत तत्त्वले छालामा जम्मा भएका विकारलााई पखाली छालालाई स्वस्थ राख्छ ।
भिन्डीमा अक्सिडेन्ट्स, भिटामिन–सी, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, आइरनजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछन् ।
आँखा धमिलो देख्नेका लागि पनि भिन्डीको तरकारी खानु लाभदायक हुन्छ ।
भिन्डीमा पाइने आइरन, भिटामिन–के आदिले रक्तअल्पता हुन दिँदैन ।
भिन्डीमा क्षार तत्व पाइन्छ, जसले अल्सरको असरलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
भिन्डी प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएकाले शरीरमा प्रोटिनको इन्टेक बढाउन यसको तरकारी खान सकिन्छ ।
भिन्डीको परिकार कसरी बनाउने ?
१. एक अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने, चिप्ले भिन्डीमा रहेको तत्वले आन्द्रामा हुने कोलोन क्यान्सरको बिषालु तत्वलाई हटाउँने क्षमता राख्छ । भिन्डी क्यान्सरमा फाइदाजनक हुन्छ ।
२. भिन्डीमा प्रोटीन, क्याल्शियम, वोसो, कार्बोहाइड्रेड, सोडियम र फलामका साथै फोस्फोरस जस्तो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक सबैजसो तत्व सामेल हुन्छ ।
३. भिन्डीको प्रयोगले केस लामो सामयसम्म कालो र घना हुन्छ । भिन्डीको सेवन मात्र होइन, यसलाई स-सना टुक्रामा काटेर केसमा लगाउन सकिन्छ । यसले केसलाई मुलायम बनाउँछ ।
४. भिन्डीले तौल नियन्त्रण गर्न पनि सघाउँछ । यसले शरीरमा बढ्ने बोसोलाई घटाउँछ, जसको कारण पेटमा अतिरिक्त बोसो लाग्दैन र तौल नियन्त्रण हुन्छ ।
५. हरियो भिन्डीमा रहेको आइरन तत्वले हाम्रो शरीरमा निकै फाइदा पुर्‍याउँछ । यसले रगतमा हेमोग्लोबिन निर्माण गर्छ, जसले तपाईलाई एनीमियाबाट बचाउँछ । यसका साथै भिन्डीमा रहेको भिटामिनले रक्तश्राव रोक्न सहयोग गर्छ ।
६. यसमा रहेको फाइबरले कब्जियतको समस्या हटाउन सहयोग गर्छ ।
७. भिन्डीले ब्लडमा सुगरको मात्रा कम गर्छ । यसले गर्दा मधुमेहका रोगीलाई भिन्डी सेवन उपयोगी हुन्छ ।
यसरी बनाउन सकिन्छ भिन्डीको स्वादिलो परिकार
– एक कराहीमा बदामलाई मध्यम आँचमा सेकाउने । त्यो सेलाएपछि पिस्ने ।
– एक कराहीमा बेसनलाई मध्यम आँचमा भुट्ने । त्यसलाई बदामसँगै मिसाएर राख्ने ।
– एक कराहीमा मध्यम आँचमा तेल तताउने ।
– त्यमाथिबाट तारेको भिन्डीलाई हालेर राम्ररी चलाउने । एक मिनेटपछि त्यो पाक्छ ।
Don't Miss it स्वास्थ्यका लागि कतिको पोषिलो निगुरो साग ? जानिराखाैँ
Up Next लामो समय बाँच्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईले यी कार्य गर्न जरुरी छ
13 hours ago mygyanbigyan